नागरिक न्युजमा प्रकाशित,९ असार, ललितपुर।
सहयोगीकै भरमा विद्यालय
कान्तिपुरमा प्रकाशित,९ असार, सल्यान।
कालीमाटी गाउँपालिका ७, आम्बासमा रहेको मनकामना आधारभूत विद्यालय शिक्षकविहीन अवस्थामा छ । १ देखि ३ कक्षासम्म सञ्चालित विद्यालयमा २ शिक्षकको दरबन्दी रहे पनि शिक्षक नहुँदा कार्यालय सहयोगी र बालविकास केन्द्रकी सहयोगी कार्यकर्ताको भरमा विद्यालय चलिरहेको छ।
रातोपाटीमा प्रकाशित,८ असार, कैलाली ।
धनगढी बस्ने १३ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा ३ जनालाई शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा धनगढी उपमहानगरपालिका-१५ उर्मागाउँ बस्नेहरु २५ वर्षीय फट्टुलाल चौधरी, २३ वर्षीय बिजय चौधरी र सोही उपमहानगरपालिका-७ मनेहरा बस्ने २५ वर्षीय झगरु चौधरी रहेका छन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,८ असार, पाल्पा।
कोही ओछ्यानबाट उठ्नै सक्दैनन्। कसैको आँखा त कसैको कानमा समस्या छ। कसैको मानसिक अवस्था ठिक छैन। कोही बोल्न सक्दैनन्। कसैको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन।
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,८ असार, बुटवल।
बालगायक अशोक दर्जीको गीत, ‘आमा जस्तो ठूलो कोही छैन संसारमा’ भन्ने गीत खुबै चर्चामा छ। तर रुपन्देहीको देवदहमा भने तीनै आमाबाट दुई बालबालिका प्रताडित बनेका छन्। आमा गुमाएपछि आएकी सौतेनी सानीआमाको कुटपिटले आठ वर्षीया सिर्जना सारु र १२ वर्षीया शुशिल सारु प्रताडित बनेका हुन्। छोराछोरीलाई पशु व्यवहार गर्ने आमा डिलमाया सारुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित,८ असार, कालिकोट।
बूढानीलकण्ठ स्कुलमा १० कक्षासम्म पढाउने आश्वासन पाएपछि पचालझरना–५ का ठोसे नेपालीले ७ वर्षीय छोरालाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँ ऋण काढेर काठमाडौं पठाए । उनलाई लागेको थियो– धूलोमाटोसँग खेल्ने छोरो राजाका छोराछोरी पढ्ने स्कुलमा गएपछि भविष्य चम्किनेछ।
उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित,८ असार, हुम्ला।
काठमाण्डौको सुकेधारामा रहेको ऐश्वर्य बालगृहमा राखिएका हुम्लाका २४ जना बालबालिकाको उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ।
नागरिक न्युजमा प्रकाशित,७ असार, इटहरी ।
इटहरी ९ मा ससुराली घरमा आएका बेला बालिकालाईं जबरजस्ती गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले सुनसरी बराहक्षेत्र वडा नं. ६ घर भएका देवेन्द्र गौतमलाई पक्राउ गरेको हो।
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,७ असार,कालिकोट ।
अस्पताल परिसरमै डाक्टरको कारले ठक्कर दिँदा बालकको मृत्यु
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,७ असार, पोेखरा ।
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालकै परिसरमा कारको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ । अस्पतालकै डा. विश्व तिमिल्सिनाले हाँकेको ग ३ च ४३६ नम्बरको कारले ठक्कर दिँदा पोखरा २८ माझठानाका ४ वर्षे संस्कार कँडेलको मृत्यु भएको हो । शनिबार बिहान साढे ८ बजे पार्किङस्थलमा डा. विश्व तिमिल्सिनाको कारले कँडेललाई किचेको थियो।
कान्तिपुरमा प्रकाशित,६ असार, पर्सा।
सरकारले बालबालिकामा हुने कुपोषण रोक्न ठूलो लगानी गरेको छ तर सम्बद्ध व्यक्तिमा त्यो पुग्न नसक्दा लगानी प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । वीरगन्ज महानगर २३ प्रसौनीकी डेढ वर्षीया बालिका कुपोषित भेटिनु त्यसैको उदाहरण हो । आमा गुमाएकी सुन्दरमाला दासमा चरम कुपोषण रहेको पाइएको छ।
कुपोषणले ग्रस्त दलित बालबालिकामा
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,६ असार, बाजुरा।
जिल्लाका दलित बालबालिका कुपोषणले ग्रस्त बनेका छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण आवश्यकताअनुसारको पोषणयुक्त खानाबाट वञ्चित अधिकांश बालबालिका कुपोषणको चपेटामा छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र ब्रह्मतोला स्वास्थ्य चौकीको तथ्यांकमा बुढिगंगा नगरपालिका–१ अम्कोटमा ३ वर्षकी फुलचना नेपाली मात्र कुपोषित छन्।
गोरखा लैजाँदै गरेका ४१ चेपाङ बालबालिकाको उद्धार
कान्तिपुरमा प्रकाशित,६ असार, चितवन।
विकट पहाडी क्षेत्र राप्ती नगरपालिका–१३ का ४१ जना चेपाङ बालबालिकाहरुलाई बिहीबार दिउँसो चितवन प्रहरीले भरतपुरबाट उद्धार गरेको छ । उनीहरुलाई दुईवटा गाडीमा राखेर गोरखा लैजाँदै गरेको अवस्थामा उद्धार गरेको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दानबहादुर मल्लले बताए । स्कुल पढाउन भनेर गाउँबाट ल्याए पनि कुनै प्रक्रिया नपुर्‍याएको मल्लले जानकारी दिए।
जन्मदिने आमाले बाँसघारीमा फालिन् : नक्कली आमा बन्नेको हानाथाप
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,५ असार, जनकपुरधाम।
नौं महिनासम्म कोखमा राखेर जन्मेपछि आमाले शिशुलाई बाँसघारीमा फाल्न थालेका छन्। धनुषाको तारा पट्टीमा आमाले नवजात शिशु फालेको भेटिएको छ।
श्रवण शक्ति नभएको भन्दै विद्यालयले लिएन बालिकाको भर्ना
अनलाइनखबरमा प्रकाशित,५ असार, बर्दिया।
बढैयाताल गाउँपालिका–४, खैरेनीकी १० वर्षीया राधा पासी विद्यालय भर्ना हुन नपाउँदा शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएकी छन् । घर नजिकको विद्यालयले सुस्त श्रणव शक्ति भएको भन्दै भर्ना लिन इन्कार गरेपछि उनी पठनपाठनबाट वञ्चित भएकी हुन्।
अपांग बालिकालाई करणी गरेको अभियोगमा दुई पक्राउ
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित,४ असार, काभ्रे।
बौद्धिक अपांगता भएकी बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा काभ्रे प्रहरीले दुईजना पक्राउ गरेको छ । काभ्रे जिल्ला चौंरीदेउराली गाउँपालिका ५ का वर्ष ३३ का राजकुमार ढुंगेल र अर्का १७ वर्षका एक युवकलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी दिपक गिरीले बताए।
थाहा खबरमा प्रकाशित,४ असार, काठमाडौं ।
समुदायमा आधारित पुनस्स्थापन (सीबीआर) संस्थामा २०६३ सालमा बहिरा अपांग शिक्षकको एक कोटा थियो। २०६६ जेठ १९ मा शिक्षा विभागबाट थप ६ वटा राहत शिक्षक कोटासहित संस्थाले सातवटा शिक्षक दरबन्दी प्राप्त गरेको छ।
नागरिक न्युजमा प्रकाशित,४ असार, सर्लाही।
रामनगर गाउँपालिका–१, चमार टोलका ५ वर्षीय रवि रामको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ।
कोसीमा डुबेर दुइ बालक बेपत्ता
नागरिक न्युजमा प्रकाशित,४ असार, उदयपुर ।
उदयपुर र खोटाङको सीमा भएर बग्ने दुधकोसीमा डुबेर उदयपुरका दुई बालक बेपत्ता भएका छन्। बुधबार बिहान पौडी खेल्न कोसी पसेका जिल्लाको लिमचुङबुङ गाउँपालिका–१ बाँसबोटेबुत्कुका १४ वर्षीय प्रविण राई र १६ वर्षीय आसन राई डुबेर बेपत्ता भएको स्थानीयले बताएका छन्।
नागरिक न्युजमा प्रकाशित,४ असार, स्याङ्जा।
१३ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । कक्षा ७ मा अध्ययनरत बालिकालाई हाडनाताभित्र कै व्यक्तिले जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा ५१ वर्षीय व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी नवीनकृष्ण भण्डारीले बताए।